Shina : Fifandonana Manodidina Ny Famokarana Herinaratra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Janoary 2018 15:47 GMT
Ny 31 Desambra 2008, nivory ny mponin'ny Zaridainan'i Junjing ao Guangzhou (Canton) hanoherana ny fanorenana toby iray famokarana herinaratra ao atsimon'io toeram-ponenana io. Araky ny Feon'ny Fanantenana , olona 24 no voasambotra ny ampitson'iny, ao anatin'izany ankizy roa (anatin'ny taona fandehanana any an-tsekoly ambaratonga voalohany) nitondra sora-baventy nandritra ny hetsika.
Efa vitan'ireo mponina ny nampiato ny fanamboarana io toby be io indray mandeha, roa taona lasa, fa nanapaka hevitra ny hamerina ny tetikasa ireo manampahefana, milaza fa amin'ny ambaratonga azo ekena ny sahan'andriamby ho ateraky ny herinaratra. Fa tsy inoan'ny mponina ireo isa sy fanazavana nomen'ny mpitantana ary kianin-dry zareo any anatin'ilay toerampiresahana Junjing [amin'ny shinoa] ireo media goavana noho ny tsy fanana'izy ireo fijery tsy mitanila :
Namaly ny lahatsoratrin'ny Southern Metropolis [amin'ny anglisy], nanambara i aaaznh:
Ara-dalàna ve ny mibahana gazety ary mamitaka ireo manampahefana ambony indrindra sy ireo olontsotra? Na ireo mpahay siansa ao amin'ny Akademian'ny siansa ao Pekin aza nanohitra ny fanamboarana ilay famokarana herinaratra ao amin'ny distrika dia ianareo ankehitriny no hanonona manampahaizana, iza no tena manampahaizana? Manompo tombontsoa manokana ny manampahaizan'ilay famokarana herinaratra, toy ireo manampahaizana tamin'ny tantara ratsy momba ny sarin'ny tigra [amin'ny anglisy]. Misy toerana betsaka ao amin'ny faritra, maninona no tena misisika mafy ry zareo hoe eny akaikin'ny sekoly sy toeramponenana no hanorenana ilay toby famokarana herinaratra?
Manipika i Ajuns:
Tsy afaka afenin'ny manampahefana intsony ilay izy, ka manomboka mampiasa ny mpampahalala vaovao izy mba hanaovana fampielezankevitra mirona, tsy maintsy mitady fomba isika amin'ny fampiasana aterineto hitenenana ny marina amin'ireo olona, amin'ny famoahana fanafihadiana sy sary mba hampahafantaraina ny zava-mitranga.
Nanampy i qinf2:
Inona ny fanazavana ny tatitra mitanila kely tahaka izany? Maninona no tsy tonga manantona ny olona aty ny mpanao gazety? Ao Junjing, betsaka ny mponina no avy any ivelan'ny faritany, ary betsaka no manana ambaratongam-pahalalàna ambony, fantany ny mety sy ny tsy mety. Maninona no tsy tenenin'izy ireo ny antony mahatonga ireo olona nahita fianarana ireo midina eny an-dalana manao hetsika? Inona no ilàna an'ireo gazety ireo?
Namoaka an'ito sary ito i “Mahantra aho ary tsy tena matahotra” mba hilazany ny fahatsapany:
Tena akaikin'ny toeramponenana ny toerana misy ilay toby famokarana herinaratra, tahaky ny asehon'ny sary ito ambany ito, izay ahafahana koa mahita ny sorabaventy manohitra mihantona eny amin'ireo trano lehibe:
Nanomboka ny 30 Desambra 2008 io tantara vaovao momba ny fifandonana eo amin'ny mponin'ilay faritra sy ny polisy io, rehefa nisy polisy marobe tonga tao an-toerana mba hanokafana indray ny toeram-panamboarana ilay toby famokarana herinatra :
Ho fanoherana an'izay hetsiky maherin'ireo manampahefana izay, nanapaka hevitra ny hikarakara fivoriana hivavahana ho an'ny fahasalaman'ireo zanany ny mponina tao an-toerana, ny alin'ny taombaovao :
Betsaka ny polisy niditra an-tsehatra ary nisy ny fifandonana :
Tohin'ny fisamborana nataon'ny polisy an'ireo mpanao fihetsiketsehana niisa 24, mbola nisy fivoriana na “diabe” (fihetsehana) hafa nandritra ireo andro vitsivitsy farany teo. Ito lahatsary ito afaka ahitana ny fivoriana tamin'ny 3 Janoary 2009, izay ahitana ny mponina nangataka ny famotsorana ireo mpanao fihetsiketsehana nosamborin'ny polisy :
Mba hahafahana manohy ny hetsipanoherana, niresaka momba ny tetika vaovao ho fanoherana teo amin'ny toeram-piresahana [amin'ny teby shinoa] ireo mponina manodidina ilay toby famokarana herinaratra ho atsangana :
Nandroso sosokevitra ny tsy handoavana intsony ny saram-panofàna i Moonlight:
Efa nihetsika nandritra ny andro vitsivitsy aho, ary nahatsapa fihetsehampo betsaka, tahaky ny tamin'ny fotoana naha-tany an-tsekoly ahy, fa tamin'izany fotoana izany, nihetsika ho fiarovana ny firenena (tamin'ny namelezana baomba ny masoivohon'i Shina tao Belgrade, tamin'ny 1999). Ankehitriny, ho fiarovana ny toerana fonenako ahy manokana, ny fonenantsika. Raha ny tena marina, ohatra ny nahatsapa aho fa mafy noho ny orana ny feon'ny kotroka. Toy ny sokatra ilay orinasa mpamokatra herinaratra, tsy mahalala izay mitranga any ivelany.
Aleo miverina mitony isika ary mieritreritra, tsy mieritreritra zavatra be loatra miaraka indray mandeha ve isika? Mivazavaza teny filamatra manohitra ny herisetra amin'ireo polisy, ary amin'ny fanamboarana ilay toby famokarana herinaratra any amin'ny mpitantana izay mikarakara ny herinaratra. Miady any amin'ny sampandraharahan'ny fanaovana drafitra isika isika ho an'ny famindràna ny toby famokarana herinaratra . Mangataka tany madio kokoa noho ny fitsinjovana ny tontolo iainana. Iray mifanandrina amin'ny efatra isika, miady amin'ny rehetra nefa tsy nanao na inona na inona azy ireo. Izay no mahatonga ahy handroso sosokevitra ny hifantohana amin'ny zavatra iray ihany aloha.
Mihevitra aho fa afaka ataontska lasibatra ny tompony sy ny mpitantana ireo tranontsika ireo, birao mitovy ihany no ifampizaràn-dry zareo. Mandritra ny fotoana anaovantsika “diabe”, tokony atsahatra ihany koa ny fandoavantsika ny sandam-panofàna. Zavadehibe ny vola, raha tsy mandoa mandritra ny telo volana isika, hihetsika ny mpitantana avy amin'ny tompontrano. Ho afaka hanao inona ry zareo? Hanapaka ny rano? Tsy mino aho fa hanapaka rano ho an'ireo mpanofa an-jatony izy ireo, tsy tsara ny mahita eny anatin'ny fampahalalambaovao ny fampisehoan'ny olona maro milahatra eny an-dalana mba hahazo rano.